नेकपाका विद्यार्थी नेता बस्याल गिरफ्तार — Sanchar Kendra
१काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३०९८ संक्रमित थपिए
२आज ९२४७ जनामा कोरोना सक्रमण पुष्टि, २१४ को मृत्यु
३एमालेसँग पार्टी बिभाजनको रहस्य खोल्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, ओलीले के भने ?
४तीन करोड चिनियाँ केटाहरुले विवाह गर्ने केटी नै पाएनन्, यस्तो छ कारण
५चितवनका अस्पतालमा आज थप ११ कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु
६सिंहदरबार गेटैमा मन्त्री र उपसचिवको गाडी ठोक्किए, ट्राफिकले के गर्यो कारवाही ?
७आइसाेलेसनमा बसेका प्रधानामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापालाई कसले दियो श्रद्धाञ्जली ?
८प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता
९नेपालमा पनि देखिन थाल्यो चक्रवातकोे प्रभाव
१०समयमा नै दोस्रो डोज खोप नपाए के हुन्छ ? यसो भन्छ डब्ल्यूएचओ
११भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या २६ दिनयताकै कम
१२म्यानमारमा सेनाको दमनबिरु’द्ध लड्न बन्दुक बोकिन् यी सुन्दरीले
नेकपाका विद्यार्थी नेता बस्याल गिरफ्तार
नवलपरासी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीका नेता रमेश बस्याललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरीले आइतबार विहान घरमा खाना खान लागेका बेला उनलाई पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटबाट गिरफ्तार गरेको हो ।
गिरफ्तार पर्नेहरुमा पार्टीका मेची ब्युरो सदस्य जितमान राई र अर्का जिल्ला सदस्य असल पन्धाक रहेका छन् । नेकपा मेची ब्युरो कार्यालयका सदस्य प्रमोदले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गिरफ्तार परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहाइको माग गरेका छन् । रिहा नगरिए संघर्ष गर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
यस्तै प्रहरीले उता सुर्खेतमा अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य भीम कठायतको घरमा छापा मारेको छ । विशेष सुराकीको आधारमा हतियारसहित त्यहा पुगेको प्रहरी टोलीले घरमा छिरेर खानतलासी गरेको बताइएको छ ।
छापा मार्ने क्रममा कोठाका सामानहरु जथाभावी फ्याकिएको छ भने घरमा केटाकेटी र अविभावकलाई धम्की दिइएको छ । यता हतियारसहित प्रहरी गाउँमा छिरेर आफुहरुलाइ आतंकित पारेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई जहा भेट्यो त्यहि समात्ने निर्देशन दिएको कारण प्रहरीलाई हैरानी परेको छ । एक प्रहरी अधिकृतले सरकारको यस्तो रवैयाका कारण आफुहरुलाई स्थानीय जनतासंग सम्बन्ध सुधारमा निकै चुनौती थपिएको बताएका छन् ।